Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara biogas | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Enwere otutu ikike eji emeghari ohuru ma e wezụga ihe anyị maara dịka ikuku, anyanwụ, geothermal, hydraulic, wdg. Taa, anyị ga-enyocha ma mụta banyere ike ọkụ nwere ike imegharị, ikekwe amabeghị ndị nke ọzọ, mana nnukwu ike. Ọ bụ ihe gbasara gas.
Biogas bụ gas dị ike nke sitere na mkpofu ahịhịa. Na mgbakwunye na ọtụtụ uru ya, ọ bụ ụdị nke ume na ume ọhụrụ. Chọrọ ịmatakwu banyere biogas?
1 Njirimara biogas
2 Kedu esi emepụta biogas
3 Ike ike
4 Biogas akụkọ ihe mere eme
5 Kedu ihe bụ biodigesters?
6 Biogas ngwa taa
Biogas bụ gas nke na-emepụta na gburugburu ebe obibi ma ọ bụ na ngwaọrụ ụfọdụ. Ọ bụ ngwaahịa mmeghachi omume biodegradation nke ihe dị ndụ. A na-emepụta ha na ebe a na-ekpofu ahịhịa dịka ihe niile edozi edozi. Mgbe ekwuru na a na-ekpughere ndị na-ahụ maka ihe ndị ọzọ, ihe microorganisms dị ka nje methanogenic (nje na-apụta mgbe enweghị oxygen na nri na methane gas) na ihe ndị ọzọ na-emebi ya.
Na gburugburu ebe a ebe ikuku oxygen adịghị na nje ndị a na-eri ihe dị ndụ, ihe mkpofu ha bụ methane gas na CO2. Ya mere, ihe mejupụtara nke biogas ọ bụ ngwakọta mejupụtara 40% na 70% methane na ndị fọdụrụ na CO2. O nwekwara obere akụkụ gas ndị ọzọ dịka hydrogen (H2), nitrogen (N2), oxygen (O2) na hydrogen sulfide (H2S), mana ha abụghị isi.
Kedu esi emepụta biogas
A na-emepụta biogas site na nkwarụ anaerobic ma ọ bara ezigbo uru maka ịgwọ ihe mkpofu na-emebi emebi, ebe ọ na-emepụta mmanụ ọkụ dị oke ọnụ ma na-ewepụta ihe na-adịghị mma nke enwere ike itinye n'ọrụ dị ka ihe eji edozi ala ma ọ bụ comeric generic compost.
Na gas a Enwere ike ịmepụta ike eletrik n'ụzọ dị iche iche. Nke mbụ bụ iji turbines ịkwaga gas ma nye ọkụ eletrik. Ọzọ bụ iji gas na-emepụta ọkụ na oven, stovu, draya, igwe mmiri ma ọ bụ sistemu ọkụ ọzọ chọrọ gas.
Dika esi eme ya site na ihe di egwu nke ihe anakpo ya, ana ewere ya dika ume ohuru nke nwere ike dochie ihe ndi ozo. Site na ya ị nwekwara ike nweta ume maka isi nri na ikpo ọkụ dịka ikuku gas si arụ ọrụ. N'otu aka ahụ, biogas jikọtara ya na igwe na-enye ọkụ ma na-emepụta ọkụ eletrik site na igwe ọkụ ọkụ n'ime.
Mwepu nke biogas na ebe mkpofu ahịhịa
Nke mere na enwere ike ikwu na biogas nwere ikike dị ka iji dochie mmanụ ala bụ n'ihi na ọ ga-enwerịrị nnukwu ike. Na cubic mita nke biogas o nwere ike igbanye ruo awa isii nke ìhè. Ọkụ a na-emepụta nwere ike iru ihe dịka bọlbụ 60 watt. I nwekwara ike ịgba friji mita cubic maka otu awa, ihe incubator maka 30 nkeji, yana HP moto maka awa 2.
Ya mere, a na-atụle biogas gas dị ike nke nwere ikike ike dị egwu.
Biogas akụkọ ihe mere eme
Oge izizi enwere ike ihu banyere gas a bidoro n'afọ 1600, mgbe ọtụtụ ndị sayensị chọpụtara gas a dịka nke na-abịa site na ire ere nke ihe ndị dị ndụ.
Kemgbe ọtụtụ afọ, na 1890, e wuru ya akpa biodigester ebe biogas na emeputa ọ dịkwa na India. Na 1896 oriọna ndị dị n'okporo ámá dị na Exeter, England, na-enye gas site na nchịkọta ihe na-eme ka apịtị dị na nsị mmiri nke obodo ahụ.
Mgbe agha ụwa abụọ biri, ụlọ ọrụ ndị a sị na ha na-emepụta biogas malitere ịgbasa na Europe. N'ime ụlọ ọrụ ndị a, e mepụtara biogas iji rụọ ọrụ n'ụgbọala nke oge ahụ. Imhoff tankị bụ ndị a maara dị ka ndị nwere ike ịgwọ mmiri mmiri mmiri na mmiri na-emepụta ihe na-emepụta ihe iji nweta biogas. Ejiri gas nke emepụtara maka ọrụ nke osisi, maka ụgbọ ala ndị ọchịchị na n'obodo ụfọdụ ka a gbanye ya na netwọ gas.
Mgbasa biogas gbochiri nfe nnweta na ịrụ ọrụ nke mmanụ ụgbọ ala dị mfe na, mgbe nsogbu ike nke iri asaa gara aga, amalitere nyocha biogas na mmepe ọzọ na mba niile nke ụwa, na-elekwasị anya na mba Latin America.
N'ime afọ 20 gara aga, mmepe nke biogas enweela ọtụtụ ọganihu dị mkpa site na nchọpụta nke usoro microbiological na biochemical na-arụ ọrụ n'ime ya na ekele maka nyocha nke omume nke microorganisms nke na-etinye aka na ọnọdụ anaerobic.
Kedu ihe bụ biodigesters?
Biodigesters bụ ụdị nke mechiri emechi, hermetic na mmiri na-enweghị ebe a na-etinye ihe ndị dị ndụ ma kwe ka ha ree ma mepụta biogas. Onye biodigester aghaghi imechi na ikuku nke mere na anaerobic bacteria nwere ike ime ihe na degrade organic okwu. Nje bacteria Methanogenic na-etolite na gburugburu ebe ikuku oxygen adịghị.
Ndị a reactors nwere akụkụ nke karịrị 1.000 cubic mita nke ikike na ha na-arụ ọrụ na ọnọdụ nke ọnọdụ mesophilic (n'etiti 20 na 40 degrees) na thermophilic (karịa ogo 40).
A na - ewepụtakwa biogas site na ebe a na - ekpofu mmiri, ebe, dị ka a na - ejupụta ma mechibidoro ihe ndị ọzọ, a na - eke gburugburu ikuku oxygen bụ nke nje methanogenic na - emebi ihe ndị dị ndụ ma na - ewepụta biogas nke ewepụtara site na tubụ.
Uru ndị biodigesters nwere karịa ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-enye ike bụ na ha nwere mmetụta dị ala gburugburu ebe obibi ma ọ chọghị ndị ọrụ tozuru etozu. Na mgbakwunye, dị ka ihe sitere na mbibi nke ihe ndị sitere n’anụmanụ, enwere ike ịnweta fatịlaịza a na-eweghachi iji gboo ihe ubi n’ubi.
Germany, China na India bụ ụfọdụ n'ime mba ndị ọsụ ụzọ iwebata ụdị teknụzụ a. Na Latin America, Brazil, Argentina, Uruguay na Bolivia egosila ọganihu dị ukwuu na nsonye ha.
Biogas ngwa taa
Na Latin America, a na-eji biogas na-emeso ndị ọbịa na Argentina. Nzụkọ bụ ihe fọdụrụ na-emepụta na mmepụta nke okpete na n'okpuru ọnọdụ anaerobic ọ na-eweda ya ala ma na-emepụta biogas.
Ọnụ ọgụgụ ndị biodigesters n'ụwa amabeghị oke. Na Europe enwere naanị biodigesters 130. Agbanyeghị, nke a na - arụ ọrụ dịka ike nke ume ọhụrụ ndị ọzọ dị ka anyanwụ na ifufe, ya bụ, dịka achọpụtara ma mepụta teknụzụ, ọnụ ahịa mmepụta na-ebelata ma ntụkwasị obi nke ọgbọ biogas na-akawanye mma. Ya mere, ekwenyere na ha ga-enwe mpaghara mmepe dị elu n'ọdịniihu.
Itinye biogas n’ime ime obodo dị ezigbo mkpa. Nke mbu enyerela aka inye ndi oru ugbo ume nri na nri ahihia nke kachasi ala ndi nwere obere ego na uzo siri ike inweta uzo ike.
Maka ime obodo, e mepụtala teknụzụ nke na-achọ iji nweta ndị na-agbari nri na ọnụ ala pere mpe yana iji rụọ ọrụ dị mfe iji rụọ ọrụ. Ike nke ekwesiri imeputa adighi ka obodo ndi mepere emepe, ya mere o bughi onodu ka oru ya di elu.
Ebe ozo eji biogas eme ihe taa Ọ dị na mpaghara ugbo na agro-ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ebumnuche nke biogas na mpaghara ndị a bụ inye ike ma dozie nnukwu nsogbu nsogbu mmetọ na-ebute. Na biodigesters enwere ike ịchịkwa ọrịa nke ahịhịa dị mma. Ndị a biodigesters nwere arụmọrụ na ngwa ha, na mgbakwunye na ịnwe nnukwu ụgwọ mbụ, nwee usoro nlekọta na arụmọrụ dị mgbagwoju anya.
Ọganihu ndị a na-eme n'oge na-adịbeghị anya na akụrụngwa emeela ka iji gas arụ ọrụ rụọ ọrụ nke ọma yana ọganihu na-aga n'ihu na usoro ịgba ụka na-eme ka mmepe na-aga n'ihu na mpaghara a.
Mgbe etinyere ụdị teknụzụ a, ọ bụ iwu na ngwaahịa ndị a na-agbanye na ntanetị ntanetị nke obodo. bụ nanị organic. Ma ọ bụghị ya, ọrụ nke ndị digesters nwere ike emetụta na mmepụta biogas siri ike. Nke a emeela n'ọtụtụ mba na ndị biodigesters agbahapụla.
Omume zuru ebe niile n'ụwa bụ ebe mkpofu nsị. Ebumnuche nke omume a bụ nke iwepu nnukwu mkpofu ihe ewepụtara n’obodo ukwu na nke a, site na usoro ọgbara ọhụrụ, ọ ga-ekwe omume iwepụta ma sachapụ gas methane nke emepụtara na ọtụtụ iri afọ gara aga nke a kpatara nnukwu nsogbu. Nsogbu di ka onwu nke ahihia nke di na mpaghara ulo ogwu, ihe ojoo na ihe gbawara.
Ọganihu nke usoro mmịpụta biogas emeela ka ọtụtụ obodo ndị dị n'ụwa, dị ka Santiago de Chile, jiri biogas dị ka isi iyi na ntanetị mgbasa gas n'obodo mepere emepe.
Biogas nwere atụmanya dị ukwuu maka ọdịnihu, ebe ọ bụ ume ọhụrụ, ume dị ọcha nke na - enyere aka belata nsogbu mmetọ na nsogbu ọgwụgwọ mkpofu. Na mgbakwunye, ọ na-enyere aka ọrụ ubi nke ọma, na-enye dị ka fatịlaịza sitere na ngwaahịa na-enyere aka na usoro ndụ nke ngwaahịa na ọmụmụ nke ihe ubi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ihe ọkụkụ » Biogas » Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara biogas
Wdg Jorge Bussi dijo
Ana m eme nnyocha iji mee biodigester.
Na-arụ ọrụ n'ugbo ezi na isi 8000, achọrọ m ụlọ ọrụ nwere ahụmịhe na iwu ndị biodigesters.
Jiri obi ekele
Zaghachi na Ec. Jorge Bussi
European Union ga-ewepụ ụtụ isi na njiri onwe onye